GarsoorNews - Qabiilkee ayuu Farmaajo Siin Doonaa Xilka RW Somalia?
MUQDISHO (Garsoor Online) — Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa noqday Madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya, waxana soo dhaweeyay dhamaan dad weynaha Soomaaliyeed.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa loo dhaariyay xilka, laakiin wali lama wareegin talada dalka, waxana la rajeynayaa in uu dhawaan gudo galo shaqooyinkiisa horyaala madaama dalka uu ku jiro xaalado adag.
Guuxa siyaaseed ee Muqdisho ka jira ayaa hada ah qofka noqon doona Mas’uulka ugu xilka sareeya Beesha Hawiye ee dad ahaan ugu badan Bulshada Muqdisho.
Dad ku dhaw-dhaw Musharax Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegaya in durbaba uu Madaxweynuhu bilaabay in la kulanka siyaasiyiinta iyo doorashada qofkii la shaqeyn lahaa ee iman lahaa xilka Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa inta badan taageero ka hela beesha Habargidir, waxana ay u badan tahay si uu u dhabeeyo isbadal taam ah in uu siyaasi beeshaas ka soo jeeda u magacaabo xilka Ra’iisul wasaaraha.
Labada beel ee ugu waa weyn Hawiye waa Abgaal iyo Habargidir, waxana beesha Abgaal ay sanooyinkii u danbeeyay soo aahaayeen Ra’iisul wasaarayaal iyo Madaxweynayaal, taas oo keentay in isbadalkii xalay dhacay ay ka shaqeeyaan.
Wali ma jiro siyaasi la dhihi karo waa uu ku haboon yahay xilka Ra’iisul wasaare oo laga hadalhayo xafiiska Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, laakiin waxa Muqdisho ku jira guuxa arrintaasi ku aadan.
Muqdisho ayaa waxaa wali ka soconaya dibad baxyada lagu soo dhaweynayo Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo.
Beeshee Guul Darada Biday Xasan Sheekh Maxamuud?